ပိုးသတ်ဆေး အမြဲသောက်လို့ရလား? -
” ဝမ်းပျက်နေတယ် ဆရာ၊ ကျွန်မ မက်ထုံ (အရပ်စကား) Metro သောက်ထားတယ်။ “
” ဟဲ့ ဒီဆေးသောက်ကြည့်ပါလား၊ ကိုဗစ်မှာပေးတဲ့ဆေး အဇီသို (Azithro) လေ၊ အသက်ကယ်ဆေး “
” လည်ပင်းနာလို့ အမောက်ဆေး (Amoxil) သောက်ထားတယ်ဆရာမ”
အပေါ်က မက်ထုံ၊ အဇီသို၊ အမောက်ဆေး အဲ့ဒါတွေက ပဲကြီးလှော်မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုးသတ်ဆေးတွေပါ။ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သတ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်ဆေးစာမပါပဲ အထက်ပါဆေးတွေကို အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပိုးသတ်ဆေးက သောက်ပြီးသားပါပဲ။ ပဲကြီးလှော်တောင် အဲ့လောက်ဝါးမယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုဗစ်ဆိုလည်း Virus ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို Bacteria ဘက်တီးရီးယားသတ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေး Antibiotics တွေက နှစ်မျိုးလောက်သောက်ပြီးသားပါပဲ။ အနာတခြား ဆေးတစ်ခြားဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆီလာပြတဲ့ အချိန်မှာ ပိုးသတ်ဆေးနှစ်မျိုးလောက်ကတော့ ဝါးပြီးသားပါပဲ။
ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပိုးကသတ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တာ ကျွန်မတို့လူမျိုးပါပဲ။ အချင်းချင်းကလည်း ကောင်းရင် ကိုယ့်ရောဂါပျောက်ရင် လက်တို့လိုက်ရမှ။ ရောဂါတိုင်းက Bacteria ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှတ်ယူထားစေချင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပိုးသတ်ဆေးတွေ မလိုပဲ အလွန်အကျွံသုံးစွဲရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
ပိုးကောင်ကလည်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို ခဏခဏတွေ့လည်း သူ့ကိုသူ နောက်တစ်ခါမသေအောင်၊ ဆေးဒဏ်ခံနိုင်အောင် Gene တွေကို ပုံပြောင်းပစ်ပါတယ်။
ပိုးကောင်က ဆေးတွေကိုယဉ်ပါးလာတာဟာ လူကြီးလူငယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတက်ရတဲ့ရက်တွေရှည်လာတာ၊ သေနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သောက်ရမယ့် သတ်မှတ်ရက်တွေကို ပြည့်အောင်မသောက်ရင်လည်း ဆေးယဉ်ပါးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိသဘောနဲ့မိမိ ပိုးသတ်ဆေးတွေလျှောက်မသောက်ပါနဲ့။ သူများညွှန်တိုင်းလည်း မသောက်ပါနဲ့။ ပိုးသတ်ဆေးက ပဲကြီးလှော် မဟုတ်ပါဘူး။ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးလိုအပ်မှသောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် Hope မှာလည်း ဆရာဝန်တွေနဲ့ အခမဲ့လာရောက်တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
ပိုးသတ်ဆေးမလိုပဲသောက်တာဟာ အဖြစ်များတဲ့ ကိစ္စလေးမို့လို့ အချင်းချင်းလည်း မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
reference : WHO ( overuse and misuse of antibiotics )
Oct 27, 2021 Health Tips, Pre-existing Disease
ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ ဆံပင်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ?
ဘာကြောင့်သွေးထွက်သံယိုတစ်ခုခုထိခိုက်မိတာနဲ့ ATT ကိုထိုးခိုင်းကြတာလဲ?